Arcturus: chii, maitiro, nhoroondo uye curiosities | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 05/01/2022 10:00 | Kuongorora nyeredzi
Pahusiku hwechirimo nekutanga kwechirimo, chero ani zvake ari muNyika yekuchamhembe kwehemisphere anozoona nyeredzi inopenya mudenga, kumusoro-soro: orenji yakakurumbira, kazhinji inokanganisa Mars. Is Arcturus, nyeredzi inopenya zvikuru muboka renyeredzi Bhutsu. Iyo inozivikanwa kuva nyeredzi inopenya kupfuura yose yekudenga kuchamhembe.
Naizvozvo, isu tichakumikidza chinyorwa ichi kuti tikuudze zvese zvaunoda kuziva nezveArcturus, maitiro ayo uye curiosities.
1 Arcturus, nyeredzi inopenya kupfuura yese yekumusoro kwekudenga
2 Arcturus features
3 Nyeredzi yevatorwa
4 Dzimwe nhoroondo
Arcturus, nyeredzi inopenya kupfuura yese yekumusoro kwekudenga
Vanofungidzira kuti Arcturus inyeredzi huru inonyevera nezvezvichaitika kuzuva mumakore anosvika mabhiriyoni mashanu. Hukuru hukuru hweArcturus mhedzisiro yekutenderera kwenyeredzi mukati, izvo zvinova mhedzisiro yekukura kwayo. 5% yenyeredzi dzatinoona mudenga dzinongoda kunetseka nezve kuita chinhu chimwe chete: shandura hydrogen kuita helium. Kana nyeredzi dzichiita izvi, nyanzvi dzenyeredzi dzinoti dziri mu "main sequence zone." Zuva rinoita izvozvo. Kunyange zvazvo tembiricha pamusoro pezuva iri pasi pe6.000 degrees Celsius (kana kuti 5.770 Kelvin kunyatsojeka), tembiricha yayo yepakati inosvika 40 miriyoni madhigirii, izvo zviri nekuda kwekuita kwenyukireya fusion. Iyo nucleus inokura zvishoma nezvishoma, ichiunganidza helium mairi.
Kana tikamirira 5 bhiriyoni makore, dunhu remukati mezuva, iro rinopisa zvakanyanya, richakura zvakakwana kuti riwedzere denga rekunze sebharumu remhepo inopisa. Mhepo inopisa kana gasi richatora vhoriyamu yakakura uye zuva rinoshanduka kuita nyeredzi tsvuku hofori. Tichifunga nezvehukuru hwayo, Arcturus inotora vhoriyamu yakakura. Kuwanda kwayo kuri pasi pe0,0005 kuwanda kwezuva.
Kuchinja kweruvara rwenyeredzi iri kukura imhaka yekuti nucleus yava kumanikidzwa kupisa nzvimbo yakakura, yakaita sekometi iri kuedza kupisa kane zana nemoto wakafanana. Naizvozvo, tembiricha yepasi inodzikira uye nyeredzi dzinotsvuka. Chiedza chitsvuku chinoenderana nekudzikira kwekushisa kwepamusoro kweanenge 4000 Kelvin kana zvishoma. Kunyanya, tembiricha yepamusoro yeArcturus i4.290 madhigirii Kelvin. Iyo spectrum yeArcturus yakasiyana neZuva, asi yakafanana zvakanyanya neyakajeka yezuva. Sunspots "inotonhora" nzvimbo dzeZuva, saka izvi zvinotsigira kuti Arcturus inyeredzi inotonhorera.
Kana nyeredzi iri kuwedzera nekukurumidza, kudzvanya kwepakati kuchapa zvishoma, uye ipapo pakati peyeredzi icha "kuvhara" kwenguva pfupi. Zvisinei, chiedza kubva kuArcturus chakanga chakajeka kupfuura zvaitarisirwa. Vamwe vanhu vanobheja izvi zvinoreva kuti nucleus ikozvino "yakagadziriswazve" nekusanganisa helium mucarbon. Zvakanaka, nemuenzaniso uyu, isu tatoziva kuti sei Arcturus yakaputika: kupisa kunowedzera-kunowedzera. Arcturus inoda kusvika makumi matatu kupfuura yezuva uye, zvinoshamisa, huwandu hwayo hwakada kufanana neAstro Rey. Vamwe vanofungidzira kuti kunaka kwavo kwakangowedzera ne50%.
Muchiono, nyeredzi inogadzira kabhoni kubva kuhelium mune yenyukireya fusion reaction haizoratidzi magineti kuita sezuva, asi Arcturus inoburitsa yakapfava X-rays, zvichiratidza kuti ine korona isina kujeka inofambiswa nemagnetism.
Arcturus ndeye halo yeMilky Way. Nyeredzi dziri mu<em>halo hadzifambi mundege yeGwara Renzou sezuva, asi nzira dzadzo dziri mundege yakarerekera zvikuru ine makwara akashata. Izvi zvinogona kutsanangura kukurumidza kufamba kwayo mudenga. Zuva rinotevera kutenderera kweMilky Way, nepo Arcturus isingadaro. Mumwe munhu akataura kuti Arcturus inogona kunge yakabva kune rimwe gwara renzou uye yakadhumana neGwara renzou makore anopfuura mabhiriyoni mashanu apfuura. Dzimwe nyeredzi makumi mashanu nembiri dzinoita kunge dziri muArcturus-like orbits. Ivo vanozivikanwa se "Arcturus boka."
Mazuva ese, Arcturus iri kuswedera pedyo nesolar system yedu, asi haisi kuswedera pedyo. Parizvino yave kusvika makiromita mashanu pasekondi. Hafu yemiriyoni makore apfuura, yaive nyeredzi yehukuru yechitanhatu yaive isingaonekwe, ikozvino iri kufamba yakananga Mhandara ichimhanya makiromita anopfuura 120 pasekondi.
Bootes, El Boyero, iri nyore kuwana-chadenga boka renyeredzi, rinotungamirwa nenyeredzi inopenya kupfuura mamwe muboka renyeredzi Ursa Major. Vazhinji vese vanogona kuziva chimiro che skillet chakadhonzwa pakati peiyo Big Dipper's musana nemuswe. Mubato wepani iyi unonongedza kwakananga kuArcturus. Ndiyo nyeredzi inopenya kupfuura mamwe munzira. Vamwe vanyanyisi ve "chizvarwa chitsva" vanotenda kuti kune maArcturians, rudzi rwekune tekinoroji rwemberi. Zvakadaro, dai kwaive nehurongwa hwemapuraneti hwaitenderera nyeredzi iyi, ingadai yakaonekwa kare kare.
Arcturus inopisa pasi semurazvo wekenduru pamakiromita masere. Asi ngatisakanganwe kuti angangoita makore makumi mana echiedza kubva kwatiri. Kana tikatsiva zuva neArcturus, maziso edu achazviona ka8 kupenya uye ganda redu rinopisa nekukurumidza. Kana ikaitwa nemwaranzi ye infrared tinoona kuti inopenya zvakapetwa ka215 pane zuva. Tichienzanisa kupenya kwayo kuzere nekupenya kwayo (hukuru), inofungidzirwa kuti imakore makumi matatu nemanomwe echiedza kubva paNyika. Kana tembiricha yepasi ichienderana nehuwandu hwemwaranzi yepasi rose yainoburitsa, zvinofungidzirwa kuti dhayamita inofanira kuva makiromita 37 miriyoni, iyo yakakura neka36 pane Zuva.
Arcturus ndiyo nyeredzi yekutanga kuwanikwa mukati mezuva nerubatsiro rweteresikopu. Nyanzvi yenyeredzi yakabudirira yaive Jean-Baptiste Morin, uyo akashandisa teresikopu diki inofefetera muna 1635. Tinogona kudzokorora kuedza kwacho nokungwarira, tichinzvenga nepose patinogona kunongedzera teresikopu pedyo nezuva. Zuva rakatarwa rekuedza kushanda uku ndiGumiguru.
Kana zvasvika kune nyeredzi dzekumashure, kufamba kweArcturus kunoshamisa - arc ye2,29 inches pagore. Pakati penyeredzi dzakajeka Alpha Centauri chete ndiye anofamba nekukurumidza. Wekutanga kuona kufamba kweArcturus aiva Edmond Halley muna 1718. Pane zvinhu zviviri zvinoita kuti nyeredzi iratidze kuzvifambisa kwakakosha: kukurumidza kwayo kwechokwadi kunoenderana nekwairipoteredza uye kuva pedyo kwayo nesolar system yedu. Arcturus inosangana nemamiriro maviri aya.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezveArcturus uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Kuongorora nyeredzi » Arcturus